U Hiili Afkaaga Hooyo! - AGA - Akadeemiya Goboleedka AfSoomaaliga
Home Dhacdooyin Cusub U Hiili Afkaaga Hooyo!
U Hiili Afkaaga Hooyo!
U hiillinta afka hooyo waa xil saaran qof kasta, iyo hay`ad iyo maamul walba oo ummaddu leedahay. Su`aashu waxay tahay, sidee ayuu qofku ugu hiillin karaa afkiisa hooyo? Jawaabta su`aashan aan innooga soo qaado Warsidaha AGA, eraygiisa tifaftirka ee tirsigiisii 9aad (Janaayo-Maarso 2020), oo ahayd sidan:
Qofku wuxuu ugu hiillin karaa afkiisa hooyo inuu tayeeyo adeegsigiisa, kobciyana xirfaddiisa qoraal. Waalid kastaa wuxuu ugu hiillin karaa inuu ubadkiisa ku barbaariyo afkiisa hooyo. Arrintan waxaa xil weyni ka sii saaran yahay Soomaalida qurbaha.
Qalinleyda iyo aqoonyahanku waxay ugu hiillin karaan inay qalinkooda ku layliyaan qoraal-curinta toolmoon iyo adeegsiga xirfadaysan ee Af-Soomaali tayo sare leh. Hal-abuurka iyo suugaanleydu waxay ugu hiillin karaan in luqadda ay dareenkooda ku soo tebinayaan ay noqoto mid leh dhumuc iyo qoto dheeri la huwiyay farshaxannimo.
Maamullada iyo dawladuhu waxay ugu hiillin karaan inay ka dhigaan afka rasmiga ah ee waxbarashada iyo maamulka xafiisyada, kordhiyaanna kaalinta uu ku leeyahay waxbarashada iyo maamulka ay gacanta ku hayaan.
Saaxiibbayaal, sida la wada garanayo, nooca hiillada qof kasta la gudboon waxaa jihaynaya goobta uu joogo, waqtiga la joogo iyo kaalinta uu bulshada kaga aadan yahay. Sidaas darteed, way kala duwanaanayaan hiillada looga baahan yahay qofka qurbaha jooga iyo kan dhulkii hooyo ku neg. Qof walba waa inuu ugu hiilliyo afkiisa hooyo marba kaalinta uu joogo iyo karaankiisa iyo awooddiisu intay yihiin.
Haddaba, aan xusuusnaano in erayada wacyigelinta ah ee aan jeedinayno maalinta afka hooyo, in farriinteennu tilmaanto, kuna baraarujiso, kaalinta looga fadhiyo dhegaystayaasha aan marba la hadlayno. Qof walowba ugu hiilli afkaaga hooyo kaalintaada iyo karaankaaga!